ထွက်ရှိပြီး ၂၄ နာရီအတွင်း iTunes မှာစံချိန်တွေတင်သွားခဲ့တဲ့ Camila Cabello ရဲ့ Debut Album – ‘Camila’
On January 15, 2018 January 15, 2018 By Atsuko
Camila Cabello ဟာ သူမရဲ့ပထမဦးဆုံး Studio Album ကို ဇန်နဝါရီလ ၁၂ ရက်နေ့ကထုတ်ဝေလိုက်ပါတယ်။ ‘Camila’ လို့ပဲရိုးရိုးရှင်းရှင်းနာမည်ပေးထားတဲ့အဆိုပါ Album ဟာ ထွက်ရှိပြီး ၂၄ နာရီအတွင်းမှာ နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၀ ကျော်က iTunes Album Chart တွေမှာ နံပါတ် ၁ နေရာကိုရောက်ရှိခဲ့ပြီး Debut Album တစ်ခုအနေနဲ့ဒီလိုရရှိတာဟာ သမိုင်းမှာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပါတယ်။
Camila ဟာ သူမရဲ့ Album ကို ဒီလိုသောင်းသောင်းဖြဖြအားပေးကြတဲ့အတွက် အရမ်းပဲဝမ်းသာမိကြောင်း သူမရဲ့ Instagram ကနေတစ်ဆင့်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
i love you. thank you. #ThisIsCAMILA #CAMILA ?
၂၀၁၇ ခုနှစ် ဒီ Album အကြောင်းကိုကြေညာခဲ့စဉ်က Album ရဲ့နာမည်က ‘The Hurting. The Healing. The Loving.’ လို့အမည်ရခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တကယ်တမ်းထွက်ရှိလာတော့ သူမရဲ့နာမည်ကိုယူပြီး ‘Camila’ လို့ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။ Camila က ဒီ Album မှာပါဝင်တဲ့သီချင်းတွေနဲ့ သူမရဲ့ အမှောင်ကမ္ဘာကနေ အလင်းရောင်ကိုရှာတွေ့ခဲ့တဲ့ ဘဝခရီးစဉ်အကြောင်းကို သရုပ်ဖော်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ သီချင်းတွေရဲ့စာသားတွေဟာဆိုရင်လည်း နာကျင်ခံစားရတာတွေ၊ သက်သာရာကိုရှာဖွေတွေ့ရှိတာတွေ၊ ချစ်ခင်မြတ်နိုးခြင်း စတဲ့အကြောင်းအရာတွေကို သရုပ်ဖော်ထားတာကိုတွေ့ရမှာပါ။ ပါဝင်တဲ့သီချင်းတွေကောင်းမကောင်းကို အောက်မှာကိုယ်တိုင်နားဆင်ကြည့်ပြီး အကဲဖြတ်နိုင်ပါတယ်။ Acoustic သံစဉ်လေးနဲ့ ‘Real Friends’ ကတော့ ဒီ Album ထဲက စာရေးသူရဲ့ favorite သီချင်းဖြစ်ပါတယ်။
Fifth Harmony ကနေထွက်လာပြီးနောက် သူမရဲ့ solo work တွေဒီလိုအောင်မြင်တာကိုမြင်ရတာ အရမ်းပဲစိတ်ချမ်းသာမိသလို သူမအတွက်လည်းဝမ်းသာပေးမိပါတယ်။ ရှေ့လျှောက်မှာလည်း သူမဆီက ဒီလိုမျိုးအပျံစားလက်ရာတွေကို ဆက်လက်မြင်တွေ့နိုင်ဖို့ မျှော်လင့်မိပါတယ်။
Music NewsNew ReleasePop
PREVIOUS POST Previous post: ပရိသတ်တွေ အမှန်အကန်သဘောကျနေတဲ့ Taylor Swift ရဲ့ Music Video အသစ် – ‘End Game’
NEXT POST Next post: Zayn Malik ဆီသို့ Deadpool ပို့တဲ့ အမှန်အကန်ခွီရတဲ့ မွေးနေ့ဆုတောင်းစကား